शल्यक्रिया गर्दा सुत्केरीको मृत्यु पछि पीडित परिवारलाई मिल्न दबाब
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७७-५-२३ गते ११४० पटक हेरिएको
जिल्लाको मलंगवास्थित अमर्त्य पोलिक्लिनिकले शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराएकी महिलाको मृत्यु भएपछि छानबिन र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका पीडित परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर मिल्न दबाब दिएको रहस्य खुलेको छ ।
शल्यक्रियाको अनुमति नै नपाएको पोलिक्लिनिकले शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराएकी मलंगवा नगरपालिका–९ की सहती कुमारीकोे भदौ १६ मा मृत्यु भएको थियो । उनको भदौ १३ मा शल्यक्रिया भएको थियो । पोलिक्लिनिकका सञ्चालक डा. सुरेन्द्र यादवले जबर्जस्ती शल्यक्रिया गरी शिशु निकाली दिएको पीडित परिवारको आरोप छ । सुत्केरीको मृत्यु पोलिक्लिनिकमै भएपछि जबर्जस्ती जनकपुरको अस्पतालमा रिफर गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पोलिक्लिनिक सञ्चालक डा. यादवका मान्छेले पीडित परिवारलाई मिल्न र घटनाको विषयमा बाहिर नबोल्न प्रलोभन र धम्की दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । अतिविपन्न पीडित परिवारलाई डाक्टरको धम्की र प्रलोभनले थप पिरोलेको छ । घटना मिलाउन र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन जनप्रतिनिधिसमेत लागेको स्थानियको भनाई छ । महिलाको मृत्यु भएको दुई दिनपछि घटना सार्वजनिक भएलगत्तै पोलिक्लिनिक सञ्चालकले खटाएका मान्छेले धम्की र प्रलोभन दिइरहेको पाइएको छ ।
पोलिक्लिनिकले दुई लाख एक हजार र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रलोभन देखाएको पीडित परिवारले बताएका छन् । घटना थामथुम पार्न भन्दै विभिन्न समूह, जनप्रतिनिधि लगायत पीडितको घर धाइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
घटना सामान्य रहेको र पोेलिक्लिनिक बिरामीको सेवामा लागि परेको मलंगवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख निरसल साहले बताउनु भयो । उहाँले घटना मिलाउने प्रयास भइरहेको आफुले पनि सुनेको बताउनु भयो । साथै पोलिक्लिनिकमा भएको गतिविधिलाई अवैध भन्न नसकिने भन्दै डा. यादवलाई जोगाउनु पर्ने साहको भनाइ छ । तर पोेलिक्लिनिकले शल्यक्रियाको अनुमति नलिएको र शल्यक्रिया गर्नु गलत भएको सबै पक्षको भनाई छ ।